အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာဘာကြောင့်လဲ?
Started this discussion. Last reply by ကိုကျော်သန်း Jun 25, 2013. 11 Replies 1 Like
မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေများပြီး တချို့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ မိတ်ဆွေးများက ဆွေးနွေးပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ...........အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ကိုကျော်သန်း replied to အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)'s discussion 'မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာဘာကြောင့်လဲ?'
"မနာလို လိုဖြစ်မည် ထင်ပါသည် သူထက်သာမှာ စီုးသောကြောင်ဖြစ်နိုင်ပါသည် တရားမပြည်ဝသေးကြောင်း ထင်ရှားသော ပါသည် ။သိုမဟုတ်လျင် အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင်လည်း ပါလိတ်မည်ထင်ပါတယ်ူ။။ ဆရာတော်လည်းအဆင်မပြေဘူး ထင်တယ်နော့ ။။"
BABY-ROAD-MAP replied to အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)'s discussion 'မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာဘာကြောင့်လဲ?'
"ဟိဟိ------------ ပစ်မှတ်တွေတော့ လွဲသွားပြီ....။ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ပြည့်စုံပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ...."
Pre-ပိစိကွေးလေး replied to အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)'s discussion 'မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာဘာကြောင့်လဲ?'
"အမှန်ပြောရရင် အစွန်းနှစ်ပါးကို ထိခိုက်မယ့်ဆွေးနွေးချက်တွေထဲ ၀င်မလာချင်ပါဘူး..။ အပြစ်ကြီးလွန်းမှာ စိုးရိမ်မိတယ်..။ ဒါပေမယ့် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင်လည်း တာဝန်မကျေဘူး အပြစ်တင်ခံရမှာစိုးတာနဲ့ နည်းနည်းဝင်ဆွေးနွေးလိုက်ပါအုံးမယ်... ဘုန်းကြီးက လူစိတ်ပေါက်ရင်…"
ကိုကိုမောင် replied to အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)'s discussion 'မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာဘာကြောင့်လဲ?'
"တပည့်တော်မြင်သလောက်ပြောရရင် ရိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဘုန်းကြီးတော်တော်များများက ဘုန်းကြီးစိတ်သိပ်မထားကြတော့ပါဘူး ဘုန်းကြီးတွေ့ကလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့တူလာလို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်"
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) replied to အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)'s discussion 'မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာဘာကြောင့်လဲ?'
"သဘောကျတယ်... ဒီလိုဝေဖန်မှုမျိုးကို လက်ကမ်းကြိုဆိုပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ တကယ်ကို သာသနာတော်အတွက် ပေးဆပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြရဲ့လား ဒါ.. သိပ်လိုအပ်တယ်...။ အရည်အချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ စာတတ်ရုံနဲ့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေဘုရား။ ကလိမ်ကကျစ်ကျတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ…"
"ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါ လောကဂိုဏ်း... ဓမ္မဂိုဏ်း... သံဃာ့ဂိုဏ်းတွေ လွတ်ဖို့လိုပါတယ်...။ လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိပေမယ့် ကိုယ်မြင်တဲ့အမြင်ဟာ Self-Truth (တစ်ကိုယ်ရည်အမြင်သက်သက်သာ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒါကို အမှန်တရားလို့ သက်မှတ်လို့မရပါဘူး...။…"
A BuddhismworldAdmin replied to အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)'s discussion 'မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာဘာကြောင့်လဲ?'
"မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေများပြီး တချို့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော နေဖို့ ကံ မပါလာ လို့ပါဘုရား လို့တပည့်တော် လျောက်ချင်ပါတယ်ဘုရား။ အမှားပါရင်ခွင်လွတ်တော်မူပါဘုရား။"
tunlin liked အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)'s discussion မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများပြီး ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာဘာကြောင့်လဲ?
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) and အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်) are now friends
အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်) သည် စိုးလေး's၏ 'ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အခုလို ဗုဒ္ဓဝင်အကျဥ်း ရေသားပူဇော်ရတဲ့ကောင်းမှုကြောင့် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ အမှန်တကယ်ရရှိမှာပါ။။"
အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်) သည် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s ၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့' အဖွဲ့တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင် ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာက ဗုဒ္ဓဘာသာ လို့သာ မှတ်ပုံတင်ထဲမှာပါရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး ကိုယ်ဘာသာအကြောင်းကို သေသေချာချာ သိဖို့အတွက် အရှင်ဘုရားတို့ လို သာသနာ့အာဇာနည် တွေ များစွား ရှိလို့ အရမ်းကို ၀မ်းသာပီတိ…"
အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်) joined အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s group
မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နေရာတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအင်အားနည်းတဲ့ နယ်မြေတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်လည်ဦးမော့လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ...။ မည်သူမဆို.... ဝေန်ဘန်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်...။See More
♣တောသူမလေး♣ သည်အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်) postedadiscussion
မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေများပြီး တချို့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ နေလို့မရတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ မိတ်ဆွေးများက ဆွေးနွေးပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ...........အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်) ပန်းတနော်မြို့။ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးSee More
သဒ္ဓါဖြူ သည်အရှင်သြဘာသ(ပြည်တော်မွန်)ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
3:42pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:00am အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 2013, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။